Mifananidzo yeiyo iPhone 7 kesi mune rose goridhe inosvinwa | IPhone nhau
Sezvo chero muridzi kana anogona kuve muridzi weiyo iPhone anofanira kuziva parizvino, isu tangopfuura maawa makumi maviri nemaviri pamberi pekuratidzwa kweiyo iPhone 24 uye iPhone 7 Plus. Isu tanga tichitsikisa zhinji dzinonzi idonha kwenguva refu uye nhasi yanga isingave shoma: OnLeaks atumira mifananidzo miviri yatinoona a inonzi iPhone 7 kurongedza 4.7 inches mu rose rose goridhe ruvara.
Sezvakaita chero kudonha, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika nezvemifananidzo iyi. Sekutaura kwaSteve pachake, zvinoshamisika kuti mufananidzo unowoneka mubhokisi reinotevera apple apple ndewe shure, kunyangwe ndichigona kuita zvine musoro kana ndikafunga nezve iyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus, ndiko kuti, Apple yaizoisa kumashure kwezvinhu zviviri izvi kuti tione kuti imwe yadzo ine kamera yepamusoro.
IPhone 7 kesi mune rose goridhe
Kune zvekare imwe mukana weApple kusarudza kuisa kumashure mumufananidzo webhokisi: kana isu tichifunga nezve iyo iyo iPhone 7 ine yekumberi magumo senge iyo iPhone 6s, Tim Cook nekambani vangangoda kusiyanisa pakati pemamodeli maviri uye nzira yakanakisa yekuratidza chikamu panowonekwa misiyano yese.
Chii chinoita kuti ndifunge kuti mifananidzo ndedzenhema zvinhu zviviri: iwo mavara atinoona kudivi anongoti «iPhone »uye ine yakawanda yakanyanyisa typeface kupfuura iyo iyo Apple yatakajaira. Dai zvaive zvisiri zvekukora, chokwadi chekuti "iPhone" chete inogona kunge iri chimwe chinhu chakafanana nezvatakaona paIpad, pakange pasina mutsauko murugwaro rwemhando ina dzekutanga.
Kune rimwe divi, ndichitarisa mukati mekesi yeangu iPhone 6s ini ndinoona kuti iine maburi matatu: imwe yeTambo yemwenje, imwe yemusoro uye yechitatu yeadapter yemagetsi. Mubhokisi rino oga isu tinoona maviri uye zvinoita sekunge iwo ari adapta uye mahedhifoni. Kana iyo kara ine denderedzwa mukati iri yeiyo mahedhifoni, inosiyanawo nemhando yazvino mudenderedzwa mukati, saka bhokisi iri rinogona kunge richitiudza chimwe chinhu chatisingakwanise kuziva izvozvi.
Sezvo isu tichigara tichitaura, isu tichafanirwa kuramba takamirira kuti tizive zvese zvichauya neiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, asi ikozvino isu tinongomirira angangoita maawa makumi matatu nematatu. Kushivirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo yeiyo iPhone 7 kesi mune rose goridhe yakaburitswa
Apple inogadzira muchina kudzidza chikamu